Xaflad lagu soo bandhigay waxqabadkii Dr. Xussein Sheikh Axmed "Kaddare" ayaa lagu qabtay magaalada Birmingham ee dalka Ingriiska
Birmingham Talaado 4 December 2012 SMC
Xaflad lagu soo bandhigay waxqabadkii Dr. Xussein Sheikh Axmed "Kaddare" ayaa lagu qabtay magaalada Birmingham ee dalka Ingriiska, xafladdaas oo gardaadinayay Prof. C/qaadir Ruumi ayaa waxaa aayadaha quraanka kariimka ah ku furay Shariif Axmadeey, ka dibna waxaa halkaasi hadallo soo dhaweyn ah ka soo jeediyay Dr. Cusmaan Xaaji Jimcaale Kulmiye & Prof. Gacameey & C/casiis Cali Ibrahim "Xildhiban" oo ka mid ah qoreyaasha Soomaaliyeed.
Intaas ka dib, waxaa halkaasi si kooban isla markaana tafaftiran hadallo qiimo leh & taariikhdii & halgankii Dr. Xussein Sheikh Axmed Kaddare ka soo jeediyay Prof. C/qaadir Ruumi, kuna saabsan wixii ay caalamka ka qoreen dadaalkii uu sameeyay Dr. Xussein Sheikh Axmed "Kaddare".
Xafladdan oo ay mid taariikhi ah isla markaana lagu xusayay waxqabadkii abwaan Dr. Kaddare, ayaa aheyd mid runtii aheyd mid maalintaas iyada ah waxyaabo badan oo shaki uga jiray guud ahaan dadka Soomaaliyeed indhaha u furi doonta.
Prof. C/qaadir Ruumi ayaa halkaasi ku soo bandhigay buuggii ugu horreeyay ee uu qoray Dr. Xussein Sheikh Axmed "Kaddare", buuggaasina waxaa lagu magacaabaa Warsame & Waasuge, ahna buug aad looga daba dhacay.
Dhinaca kale wuxuu halkaasi Prof. Ruumi ku soo bandhigay gabayaddii uu ku lahaa Dr. Xussein Sheikh Axmed "Kaddare" silsiladdii suugaantii Deelleyda ee bilaabatay horraantii sanadihii 80-aadkii ayna ka qeybgaleen abwaaniin fara badan oo Soomaali ah isla markaana mujtamaca Soomaalida ay aad u yaqaanaan.
Prof. Ruumi ayaa sidoo kale ka hadlay mowduuc ku saabsan naqdinta suugaanta & sida qotada dheer ee uu Prof. Cali Jimcaale u sharaxay sheekada Warsame & Waasuge, isaga oo soo qaatay buuggiisa ku qoran afka Ingiriiska.
Ugu dambeyntii waxaa halkaasi hadallo isugu jira ammaan, mahadcelin & kaftanba ahaa ka soo jeediyay Dr. Xussein Sheikh Axmed "Kaddare", wuxuu dadkii Soomaaliyeed ee ka soo qeybgalay xafladdaasi ka codsaday in ay xil weyn iska saaraan ilaalinta & dhowritaanka afka Soomaaliga oo aysan la'aantiis suurtagal aheyn jiritaanka dadka Soomaaliyeed.
Dr. Xussein Sheikh Axmed "Kaddare" wuxuu ku dheeraaday halgankii loo soo maray in ay dadka Soomaaliyeed yeeshaan af qoran oo suga jiritaanka ummadnimo sida ummadaha kale ee ku dhaqan caalamka dushiisa, sidaasi darteedna ay lagama maarmaan tahay in ubadka Soomaaliyeed waalidiintoodu iska xilsaaraan horay u dhigga ummadnimo & afka Soomaaliga, haatanna la joogo dhammaadkii waxyaabihii dib u dhigay horrumar la'aanta hareysay dhaqankii wanaagsanaa ee ummadda Soomaaliyeed.
Ugu dambeyntii waxay xubnihii ka soo qeybgalay xafladdaasi ballan qaadeen in ay fulin doonaan wixii uu kala dardaarmay Dr. Xussein Sheikh Axmed "Kaddare" ee ahaa ilaalinta dhaqanka Soomaaliyeed & afka Soomaaliga, waxay xafladdaasi ku soo gebagabowday si wanaagsan.